Banyere Anyị - ZERLION (SHANGHAI) TRADING CO., LTD.
Ụlọ ọrụ ZERLION (SHANGHAI) TRADING CO., LTD
Okwu ụlọ ọrụ: Amamihe na-ejupụta na amamihe
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zerlion (Shanghai) Trading Co., Ltd.bụ ahịa nzukọ nke Zhilun Mechanical & Electric Co., Ltd. Shanghai sales center agba mbọ na-akwalite ịghasa Compressor na piston ikuku Compressor na ụwa n'okpuru ika nke "JIN ZHILUN" na OEM ahaziri ngwaahịa, na-eme ka ụwa na-eche nka nka nke Chinese n'ichepụta. .Isi ụlọ ọrụ dị na Hengjie obodo, Luqiao district, Taizhou obodo, Zhejiang n'ógbè, banyere 3 kilomita site taizhou ọdụ ụgbọ elu, na Ningbo n'ọdụ ụgbọ mmiri dị gburugburu 220KM, okporo ụzọ dị nnọọ adaba maka gị nleta.Our ụlọ ọrụ nwere ebe nke 50000 square mita. ma nwee ihe karịrị ndị ọrụ 300. Anyị nwere ngwá ọrụ mmepụta ihe dị elu ma mara nke ọma na usoro nke mmepụta ihe dị ukwuu, nwere ngwá ọrụ nha nke ọma na arụmọrụ dị elu nke ahịrị mgbakọ na-akpaghị aka iji hụ na àgwà na ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa ahụ.Anyị nwere ike teknuzu ike na mmepụta management, na-achịkọta teknuzu otu na management otu si na-eduga Enterprise nke ikuku compressor na anụ ụlọ.Anyị na-eguzobe ụlọ nyocha nke onwe anyị na otu mmepe, na-enwe ike ịmepụta ngwaahịa ahụ, na-egbo mkpa dị iche iche site n'aka ndị ahịa dị iche iche na ahịa dị iche iche. Anyị na-ewere ahịa ahịa dị ka nduzi, na-agbalịsi ike maka ịdị mma survivalby na maka mmepe site na mmepe. ọhụrụ, mgbe niile na-etinye ahịa, àgwà na ọhụrụ na mbụ, na-eso ndị ọkachamara management na nọgidere na-egbo ina nke ndị ahịa.We mgbe niile na-agbaso ụkpụrụ nke ndị mmadụ-gbakwasara, ziri ezi azụmahịa, n'eziokwu& ntụkwasị obi, na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ nke ikuku compressor, na mgbalị iji mepụta akara mbụ na ụlọ ọrụ nke ikuku compressor.
Ihe dịka 220km site na Ningbo Port
Ebe ihe owuwu nke ụlọ ọrụ ahụ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50000 square mita
Ugbu a, ọ nwere ihe karịrị ndị ọrụ 300
Nhazi:Anyị nwere ndị otu mmepe nke anyị nwere onye ga-anọchi anya mmepe nke ikike ma gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche.
Ike:Anyị kwa afọ ịghasa compressor mmepụta ikike karịrị 40000 pc, piston ikuku compressor mmepụta ike karịrị 300000 pc .nke anyị nwere ike izute mkpa dị iche iche ahịa dị iche iche zuo quantity.
Ọrụ:Anyị na-elekwasị anya na ịmepụta ngwaahịa dị elu maka ahịa ahịa kachasị elu.Ngwaahịa anyị dabara n'ụkpụrụ mba ụwa, a na-ebuga ya na Europe, America, Japan na ebe ndị ọzọ gburugburu ụwa.
Ihe nkedo Compressor
Belata mfu ihe ruru 25%
Moto mbanye na-enye ohere maka nchekwa ike ruo 30%.
Uru ngwaahịa na nka nka ike
1. Nkà na ụzụ njikwa ọsọ dị ala dị ala karịa nke sistemu VSD compressor ọkọlọtọ.N'ịbụ nke dị ala karịa ọrụ 15Hz, usoro a nwere ike ịrụ ọrụ nrụgide na-agbanwe mgbe niile yana nchekwa ike dị ukwuu.
2. USoft-mmalite atụmatụ na-enye ohere maka obere ma ọ bụ enweghị mmetụta na ike ọkọnọ usoro na marginalises n'ibu iyi na akwa na mmalite-elu Leakage bụ mgbe ọ bụla ikuku usoro.Na nrụgide zuru oke, sistemụ dị mma nwere ike ịtọpụ 0.2Mpa.Igwe Zerlion VSD nwere ike ibelata mfu ahụ site na 25% naanị site na ịnye ikuku ikuku achọrọ.
3. Advanced Vector variable ugboro njikwa na-ebelata mkpọtụ na mkpọtụ. Enwere ike iji nkeji ahụ na-enweghị ihe achọrọ maka ime ụlọ pụrụ iche.Nke a pụtara ịchekwa ihe niile achọrọ iji wụnye igwe n'ebe dịpụrụ adịpụ dị ka ọkpọkọ na eriri ọkụ na ala.Mpụta iyuzucha mmanụ dị ala karịa 3ppm wee na-emebi mmetụta gburugburu ebe obibi.
4. Itinye n'ọrụ ugboro ugboro maka jụrụ jụrụ fan na mbanye moto na-enye ohere maka 30% ike nchekwa.Nke a na-asụgharị n'ime obere oge ọrụ nke ịghasa ikuku Compressor si otú a na-enwetakwu mkpa ego na-enweta ihe karịrị ndụ nke igwe.
Anyị Jinzhilun ika ikuku Compressor e rere n'ụwa nile na fọrọ nke nta 300Million RMB na 2020. Company na-ezube ịnọgide na-amụba mmepụta ahịrị, dịkwuo mmepụta ike na ịgbasa mbupụ akporo si 2020 ka 2025, na-agbalịsi ike dịkwuo kwa afọ ahịa olu ka. 600 nde yuan n'ime afọ 5.